Uphengululo lwe "Pedro kunye neKapteni" | Uncwadi lwangoku
"UPeter noKapteni" yenye yezona ncwadi zakha zabhalwa
Encarni Arcoya | | Ababhali, Ithiyetha
Umntu osandula ukusweleka UMario Benedetti Usishiyile phakathi kwegama lakhe elinomxholo omncinci osihloko sithi "Peter and the Captain", ongowomdlalo weqonga nangona, njengoko umbhali ngokwakhe wayevumile, akazange azalwe enoluvo lokuba umele.
Kuye umngcungcuthekisi kunye nomthuthumbisi Banentlanganiso yobuso ngobuso egcina iiseshoni ezininzi apho umngcungcuthekisi enomsebenzi wokwenza ukuba abo bathuthunjisiweyo bathethe kunye nokugcina ethule ukuze angangcatshi amaqabane akhe. Umgama weengcinga ohlukanisa abalinganiswa bobabini kwaye ngaphandle kokuba uKaputeni ngokucacileyo unesandla esiphezulu, iitafile ziyajika kulo lonke ibali.
Kwaye oko Pedro, othuthunjisiweyo, uyayiqonda (okanye uzenza aqonde) ukuba eneneni sele sele efile, kwaye akukho nanye yale nto iyinyani, ayenzeki, akukho nto anokulahlekelwa yiyo kwaye ukuba iintlungu yimeko yengqondo yokuba abafileyo ungasokoli ukuze ngandlela thile akhuseleke kumtya wobundlongondlongo owenziwa ngumthuthumbisi.
Kananjalo, ngokungathi ayonelanga ... uthatha isigqibo sokumngcungcuthekisa umhlukumezi ngokumhlikihla ukuxhathisa kwakhe kwaye adlale naye ukuchukumisa amaqhosha ngokwengqondo ekungekho mntu wakha wachukumisa ...
Ngokwam, yenye yeencwadi zam endizithandayo kwaye ndicinga ukuba ingayimpumelelo ukuba ibingomnye wemisebenzi yokufunda enyanzelekileyo kwizikolo eziphakamileyo ... kuninzi ukufunda Kwimigca kaMario omkhulu, angahlala ngoxolo, endibulela kuye kakhulu onke amagama asishiyileyo njengelifa kwimisebenzi yakhe ebanzi neqaqambileyo.
1 Isishwankathelo sikaPeter noKapteni
1.1 Icandelo lokuqala
1.2 Inxalenye yesibini kaPeter noKapteni
1.3 Inxalenye yesithathu
1.4 Inxalenye yesine neyokugqibela kaPeter noKapteni
2 Abalinganiswa bakaPeter nomphathi
Isishwankathelo sikaPeter noKapteni
Umsebenzi kaPedro kunye nokapteni unokwahlulwahlulwa ube ngamacandelo amane ahlukaniswe kakuhle, apho iminyhadala inyuka ngamandla ngamandla ngenjongo yokuba kukho i-crescendo emsebenzini. Oko kukuthi, ifuna oko umfundi uya kubona ukuvela kwemeko kwaye iba yingozi ngakumbi nangakumbi, inomdla. Ngale ndlela, uMario Benedetti ubambisa umfundi kumdlalo afuna ukuwudlala.
Iindawo zikaPeter nomphathi zingala:
Kule nxalenye yokuqala uya kudibana nomntu ophambili, uPedro osiwa kwigumbi lokuncinwa. Apho uyifumana ifihliwe kwaye ibotshelelwe ukuze ingakwazi ukubaleka okanye ibone nantoni na de kungene enye indoda egumbini, ekuthiwa nguKapteni.
Umsebenzi woku kukumncina kwaye ufumane ulwazi aludingayo. Wazisa uPedro ukuba okwenzekileyo kuye, isifundo asifumeneyo, ibiyinto elula kwaye ethambileyo xa kuthelekiswa nento enokumlinda ukuba akasebenzisani, Ukuphathwa gadalala ngokuqatha nokohlwaya. Into ekungekho mntu unako ukuyithwala.
Ikwalumkisa ukuba wonke umntu uthetha ngandlela ithile.
UCaptain uzama ukumenza asebenzisane ngokulungileyo, eveze yonke into enokwenzeka kuye ukuba akenzi njalo, kunye nokwenza ukuba aqonde ukuba ngumntu ofumana yonke into ayifunayo. Kwaye uyalithanda icala likaPedro, njengoko eyazi ukuba bayabathanda. Luhlobo lwe fumana ukuthembela komnye.
Nangona kunjalo, uyamsongela, hayi kuphela ngenxa yakhe, kodwa nangenxa yomfazi wakhe. Ukutshintsha ngokunganyamezeli iintlungu okanye ukubeka emngciphekweni eyona nto ayithandayo, kunye nokuphuma ngaphandle kwamaqabane akhe esazi ukuba usebenzisene, kuya kufuneka atyhile amagama amane.
Kodwa akukho nto ayithethayo, nokuba yeyobuhlobo okanye eyoyikisayo, ukhonza umphathi, kuba uPedro akasisimumu kwaye akaphenduli nakweziphi na izinto.
Inxalenye yesibini kaPeter noKapteni
Inxalenye yesibini yomdlalo ibonisa uPedro kwakhona, ngokubethwa okungakumbi kunye nokuhlukunyezwa. Kukho umphathi, ozama ukuvana nebanjwa kwaye aphendule into ekufuneka eyazi. Ke, ususa ihood, into ethi, kwinxalenye yokuqala, ihlale ikhona.
Kungalo mzuzu xa uPedro ethetha, apho amxelela khona ukuba khange ayenze ngaphambili kuba bekubonakala ngathi ayifanelekanga ukuphendula ngentloko. Nangona kunjalo, kude koyikiswe, kungoku UPedro obuza uKapteni imibuzo malunga nosapho lwakhe, aluthatha njengesoyikiso. Ukubona impendulo, uPedro ubuza kwakhona ukuba kunjani ukubuyela ekhaya emva kokubulala amanye amadoda. Oko kumenza ukuba aphelelwe ngumsindo kwaye ekugqibeleni ambethe, nangona, kunye noPedro, wayefuna ukuzenza ngathi "ungomnye wabantu abalungileyo."
Emva kwemizuzu embalwa ukuzola, UCaptain uyavelana noPedro, eqonda ukuba uziva kakubi emva kwento ayenzayo, kwaye enethemba lokuba ixhoba elijongana naye liphela linikezela ngaphambi kokuhlushwa kunye nezohlwayo ziba lusizi, ireferensi ecacileyo ecela uPedro ukuba ayeke ukuxhathisa.
Emva kokuthula, impendulo kaPedro iyayiphelisa le nxalenye.
Ukwazisa uKapteni onesidima, iimpahla zakhe zishwabene, iqhina lakhe lingaqhawukwanga. Buza emnxebeni ukuba ubuyise uPedro, obonakala ethe kratya kwaye enamachaphaza egazi ezingubeni zakhe.
Ukukholelwa ukuba ufile, uKapteni uye kuye aze ambeke esihlalweni. Kungalo mzuzu xa uPedro waphela yintsini, ekhumbula ukuba ngobo busuku, ngelixa wayethuthunjiswa kwiprod, ukukhanya kwacima kwaye babengenakumgqiba.
Kwilinge lokumbuyisela kwinyani, uKapteni ubiza uPedro ngegama lakhe, athi yena akanguye, kodwa igama lakhe nguRomulus (ligama lakhe). Kwaye naye ufile. Uyayibona ifayile ye- Ukuzama kwexhoba ukuzama ukubaleka kuloo meko, yokucinga ukuba sele eswelekile kwaye ukuba zonke iintlungu azivayo zikwicinga lakhe kuphela, kodwa ayinyani.
Emva kwengxabano noKapteni, apho ukufa kunye nokuhlanya kuvelisa ukungxola phakathi kwabo, uKaputeni uphelelwe lithemba kwaye ucinga ukuba akazukufumana nto kuye.
Yilapho iindima zitshintsha. UPedro uqala ukuthetha noKapteni, ngelixa yena eqala ukuthetha naye ngentlonipho enkulu. UKapteni uyamvulela, athethe ngomfazi wakhe, ukuba usebenze njani njengomngcungcuthekisi kwaye ubuchaphazele njani ubomi bakhe.
Kodwa nguPedro ophindayo ukuba ubhubhile kwaye akukho nto anokumxelela yona.
Inxalenye yesine neyokugqibela kaPeter noKapteni
UPedro obethiweyo kunye nokufa kubonakala emhlabeni. Kwaye uKapteni obile ebila, engenalo iqhina, ibhatyi kwaye esoyika kakhulu.
Ungqina incoko kaPedro, onomdla, ucinga ukuba uthetha noAurora, nangona eyedwa. Kungalo mzuzu xa uKapteni uyayiqonda yonke ingozi ayenzayo ngokuthuthumbisa abantu Kwaye ubuza igama, naliphi na igama, ukuzama ukumsindisa, kodwa kwangaxeshanye azisindise. Nangona kunjalo, uPedro uyala ukwenza njalo, kwaye bobabini bagwetywa ngendima yabo.
Abalinganiswa bakaPeter nomphathi
Umdlalo uqulethwe ngabalinganiswa ababini: uPedro kunye noKapteni. Imalunga namanani amabini aphikisayo agcina uxinzelelo kwibali liphela, kodwa kananjalo batshintsha indlela abacinga ngayo, baxhonywa kancinci kancinci.
Kwelinye icala, unoPedro, ibanjwa elibonakala lisamkela isohlwayo salo ngaphandle kokucela inceba okanye ukungqiba ngobomi balo. Uyakholelwa kwiinjongo zakhe kwaye uzimisele ukubakhusela nangobomi bakhe. Ngesi sizathu, kumzuzu othile ucinga ukuba sele efile, kwaye yonke into eyenzekayo kuye sisiphumo sengqondo yakhe kuphela.
Kwelinye icala, kukho uKapteni, omnye wabalinganiswa oguqukayo kakhulu kulo lonke umdlalo. Iqala njengomntu onegunya ofuna ukunxibelelana nomnye umntu ngokuveza yonke into eyakwenzeka ukuba abasebenzisani, kodwa kwangaxeshanye azame "ukwenza abahlobo" ukuze benze njalo.
Nangona kunjalo, njengoko ibali liguquka, umlinganiswa naye uyenza loo nto, eqonda ukuba akawuthandi umsebenzi wakhe, ebalisa ngeenxalenye zobomi bakhe ezimenza abe ngumntu ebusweni bokungcungcuthekiswa kwakhe. Yiyo loo nto efuna ukulungiswa kwento ayenzayo. Ingxaki kukuba uPedro akayamkeli, akakavelani naye, nto leyo iyamcaphukisa uKaputeni kuba, kwanokuvuma isono, akasamenzi omnye enze le nto ayifunayo, ukuba avume.
Ngale ndlela, uguquko lwabalinganiswa lubonwa. Kwelinye icala, le kaPedro, ozishiya ephambana nokufa esazi ukuba akazukuphuma apho kwaye ubuncinci akazukuthetha nto. Ngakolunye uhlangothi, uKapteni, osebenzayo uhlala engazi ukuba kuya kuba yintoni kwikamva lakhe.
Ngaba uyafuna ukuyifunda? Yithenge apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » "UPeter noKapteni" yenye yezona ncwadi zakha zabhalwa